समाचार - नल चुहावट को रखरखाव विधि
अन्य बाथरूम उत्पादनहरु
स्क्वाटिंग प्यान र मूत्र
भान्सा सि s्क
स्टेनलेस स्टील को हात रेलिंग
अन्य इस्पात उत्पादनहरु
इस्पात कला काम गर्दछ
नल चुहावट को रखरखाव विधि
प्रयोग को एक लामो समय पछि, नल गल्ती समस्या को एक किस्म हुनेछ, र पानी रिसाव ती मध्ये एक हो। ऊर्जा बचत र पर्यावरण संरक्षण अब वकालत गरिएको छ, त्यसैले जब नल लीक, यो समय मा मरम्मत वा एक नयाँ संग प्रतिस्थापित गर्न को लागी आवश्यक छ नलनल चुहावट एक सामान्य घटना हो। केहि साना समस्याहरु आफैंले मर्मत गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ एक पेशेवर कल गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाइँ समय मा उनीहरु संग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। नल चुहावट को सामान्य कारण के हो? कुन मर्मत विधि नल ​​लीक गल्ती छ?
सामान्यतया, नल तातो र चिसो पानी संरचना को हो, त्यसैले त्यहाँ दुई पानी inlets छन्। नल को सतह मा, त्यहाँ नीलो र रातो संकेत छन्। नीलो चिन्ह चिसो पानी आउटलेट को प्रतिनिधित्व गर्दछ, र रातो एक तातो पानी आउटलेट को प्रतिनिधित्व गर्दछ। पानी बिभिन्न दिशाहरु मा मोडिदै फरक तापमान बाट बाहिर बग्छ। यो बाथरूम मा नुहाउने सूट को रूप मा एउटै काम सिद्धान्त हो, नल को महत्वपूर्ण संरचना पनि यसको ह्यान्डल छ, जो स्वतन्त्र रूप बाट घुमाउन को लागी नल को संचालन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। शीर्ष आवरण नल को संरचना ठीक गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। थ्रेडेड मोडेलिंग मिडलवेयर भित्र एक छाला को औंठी संग कभर गरीएको छ, र तल नल को उपयोग सुनिश्चित गर्न दुई पानी inlets छ।
1. ट्याप कसैले बन्द छैनयदि ट्याप कडा गरी बन्द छैन, यो हुन सक्छ किनकि ट्याप भित्र गैसकेट क्षतिग्रस्त छ। त्यहाँ नल मा प्लास्टिक gaskets छन्, र विभिन्न ब्रान्डहरु मा gaskets को गुणवत्ता पनि धेरै फरक छ, तर यस मामला मा, बस gaskets बदल्नुहोस्!
2. नल भल्भ कोर वरिपरि पानी seepage
यदि त्यहाँ नल को भल्भ कोर को आसपास पानी seepage छ, यो अत्यधिक बल को कारण सामान्य समय मा नल पेंच गर्दा हुन सक्छ, ढीलापन वा स्थापित माध्यम बाट अलग। बस हटाउनुहोस् र नल पुन: स्थापना गर्नुहोस् र यसलाई कडा पार्नुहोस्। यदि त्यहाँ धेरै पानी seepage छ, यो गिलास गोंद संग बन्द गरिनु पर्छ।
३. ट्याप को बोल्ट खाली लीक छ
यदि नल को पानी टपकने र टपकने समस्या छ, यो हुन सक्छ कि ग्यास्केट समस्या छ। यस समयमा, बस नली हटाउन को लागी यदि गैस्केट खस्छ वा भाँचिएको छ, जब सम्म यो मर्मत गरीएको छ र समय मा प्रतिस्थापन गरीएको छ!
4. पाइप संयुक्त मा पानी seepage
यदि पाइप को संयुक्त मा पानी seepage छ, यो मूलतः हो कि नल नट ढीला वा लामो सेवा समय को कारण जंग लागेको छ। एक नयाँ किन्नुहोस् वा एक अतिरिक्त ग्यास्केट पानी seepage रोक्न राखे।
त्यहाँ दुई बिन्दु ध्यान दिन को लागी जब नल लीक छ। पहिलो, जब नल चुहिन्छ, मुख्य गेट घर मा "बाढी" बाट बच्न को लागी बन्द हुनु पर्छ। दोस्रो, रखरखाव उपकरण तयार हुनु पर्छ, र हटाइएको भागहरु एक व्यवस्थित तरीका मा राखिएको हुनु पर्छ, ताकि स्थापित गर्न को लागी असमर्थ हुन को लागी।
दैनिक जीवन मा, हामी नल को उचित उपयोग गर्नु पर्छ। हामी प्रत्येक पटक नल कडा गर्न सक्दैनौं। हामी एक राम्रो उपयोग बानी को विकास र यो एक प्राकृतिक राज्य मा राख्नु पर्छ। केवल यस तरिका मा हामी प्रभावी ढंग बाट लीक बाट नल रोक्न सक्छौं।
पोस्ट समय: मई-12-2021
सल्लाह मा स्वागत छ
किन्ने पुल बाहिर भान्साको नल को लागी सुझाव
पर्खाल माउन्ट गरिएको नल के हो?
भान्सा कैबिनेट मा कार्यात्मक हार्डवेयर
No.9 Zhongzhen रोड, Luocun, Shishan टाउन, Nanhai जिल्ला, Foshan शहर, गुआंग्डोंग प्रान्त, चीन।